Manana toerana goavana eo amin'ny tantaran'ny olombelona i Jesosy Kristy ary tsy mbola nisy toa Azy. Izy dia raisin'ny olona samihafa ho toy ny mpampianatra lehibe, mpitarika fivavahana, mpaminany, zanak'Andriamanitra, eny fa Andriamanitra koa aza. Ny nambarany sy ambaran'ny olona momba Azy dia miteraka adihevitra tsy manam-pitsaharana teo amin'ny tantara.
Tsara fipetraka ny fanontanian'i Pontsy Pilaty nanontany hoe "ka ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy, izay atao hoe Kristy?" (Matio 27:22). Alohan'ny hamaliana io fanontaniana io dia tsara fantarina aloha i Jesosy.
I. Ilay Andriamanitra tonga olona
Tonga teto an-tany tamin'ny nofon'olombelona i Jesosy Kristy. Tsy nifikitra tamin'ny maha Andriamanitra Azy Izy fa nanetry tena naka endrika olombelona. Olona feno Izy ary niaina tamin'ny maha olombelona Azy tamin'ny lafiny rehetra, saingy tsy nisy ota tao Aminy.
A. Inona ny voalazan'ny Filipiana 2:6 momba an'i Jesosy talohan'ny nahatongavany ho olombelona?
B. Inona no nataon'i Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny Filipiana 2:7?
D. Tena olombelona feno i Jesosy
1. Hazavao ny fitomboan'i Jesosy amin'ny maha olombelona Azy nandritry ny ny fahatanorany (Lioka 2:40,52).
2. Inona no navalin'i Jesosy tamin'ny fitsarana Azy (Marka 4:38)?
3. Nanao ahoana i Jesosy rehefa tsy nihinan-kanina (lioka 4:2)?
4. Nanao ahoana i Jesosy rehefa avy nandeha?
5. Ahoana ny fisehon'ny alahelon'i Jesosy (Jaona 11:35)?
6. Inona no nambaran'i Jesosy mikasika Azy (Lioka 24:39)?
II. Ilay Olombelona sady Andriamanitra
Na dia naka endrik'olombelona aza i Jesosy dia feno tanteraka tao Aminy koa ny maha Andriamanitra Azy. Diniho ireto famantarana maha Andriamanitra ananan'i Kristy ireto.
A. Anarana fiantsoana Azy
Jereo ireto andininy milaza ny anarana fiantsoana an'i Kristy ireto.
Mahefa (ny zava-drehetra) ............................. Matio 28:18
Mandrakizay ................................................. 1 Jaona 1:1-2
Tsy miova ..................................................... Hebreo 13:8
Mahalala ny zava-drehetra .............................. Kolosiana 2:2b-3
Tsy misy ota ................................................. 2 Korintiana 5:21
Masina ......................................................... Asa 3:14-15
Marina ......................................................... Jaona 14:6
Nasehon'i Kristy ny maha "Tsitoha" Azy tamin'ny alalan'ny
1. Matio 8:23-27: fahefany amin'ny _________________________
2. Lioka 4:40: fahefany amin'ny ____________________________
3. Lioka 4:33-36: fahefany amin'ny _________________________
4. Jaona 11:43-44: fahefany amin'ny _______________________
Fahefana hafa inona koa no nambara sy nasehon'i Jesosy (Marka 2:3-12)? Jereo ny andininy fahafolo. ______________________________________
Iza irery no afaka mamela helok araka an'i Marka 2:2?
Raha manana fahefana mamela heloka i Jesosy kanefa Andriamanitra irery no afaka mamela heloka, iza ary i Jesosy Kristy?
B. Anarana maha Andriamanitra.
1. Matio 1:23 ________________________ (amintsika Andriamanitra)
2. Filipiana 2:10-11 ___________________ (mpanjaka)
3. Jaona 8:58 ________________________ (anarana manokana ho an'Andriamanitra, Eksaodosy 3:14)
D. Filazana ny maha Andriamanitra
Soraty ireo filazana manokana ireo.
1. Kolosiana 2:9 _____________________________________
2. Hebreo 1:1-3a ____________________________________
3. Jaona 1:1,14. Jesosy Kristy ("Ny Teny") dia _____________
4. Titosy 2:13 ______________________________________
III. Ilay Kristy Mpamonjy
Mpamonjy izao tontolo izao i Jesosy araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 3:17. Tanisao araka ny voasoratra etsy ambany ireo fanazavana ny fahasoavam-pamonjena avy amin'Andriamanitra.
1. Jaona 1:29 _______________________________________
2. Janona 6:35 ______________________________________
3. Jaona 14:6 _______________________________________
IV Ilay Mpanjaka ho avy
Tsy olon'ny fotoan-dasa fotsiny i Jesosy. Izy no ilay Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo (1 Timoty 6:14-15) izay ho avy sy hanjaka maneran-tany indray andro any.
A. Araka ny ao amin'ny Daniela 7:14, inona ireo zavatra telo nomena an'i Kristy?
B. Inona no nolazain'i Jesosy ireo mpanara-dia Azy ao amin'ny Matio 25:31-32?
D. Rehefa niakatra tany an-danitra i Kristy afaka 40 andro taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty; inona no nambara tamin'ny apostoly (Asa 1:11)?
E. Hazavao ny fiverenan'i Jesosy Kristy (2 Tesaloniana 1:7b-10)
A. Rehefa izany ary, ahoana ny fiomanana tsara indrindra eo am-piandrasana ny fiverenany indray (2 Petera 3:14)?
B. Inona no afaka ataonao hanekena ny maha Izy Azy (Apokalypsy 5:11-14)?